I-china iqine ibhola ye-peanut engatyibilikisi engabonakaliyo kunye nefektri | Yiya
Ibhola yeYoga yenziwe ngezinto ezinobungakanani obuphezulu bePVC ngezinto ezinokusingqongileyo, ezingenabungozi kwaye ezingenancasa, ezizinzileyo kwaye ezingakhubazeki ngokulula. Sinokukubonelela ngeenkonzo ezenzelwe wena ngemibala eyahlukeneyo kunye neemilo. Unokuprinta ilogo yakho kwibhola yeyoga, okanye wenze ngokwezifiso ukupakisha kwakho.
Igama lemveliso: Ibhola yePeanut yeBhola
Izinto zeMveliso: I-PVC enobume bendalo
Umbala: Luhlaza, Mfusa, Pinki, Isilivere, Ngwevu Okanye eyenziwe
Ibhola yeYoga yenziwe ngezinto ezinobungakanani obuphezulu bePVC ngezinto ezinokusingqongileyo, ezingenabungozi kwaye ezingenancasa, ezizinzileyo kwaye ezingakhubazeki ngokulula. Ibhola yeyoga inokutshintsha endaweni yokuhlala esihlalweni, kwaye ikwasisixhobo esiluncedo kakhulu ekuziqhelaniseni. Ingakumbi ekusebenziseni amandla angundoqo, ukulungelelanisa kunye nokulinganisela komzimba wonke kuncedo kakhulu. Kwaye ukongezwa kwebhola yeyoga kunokwenza ukuba ukuziqhelanisa kube nomdla ngakumbi.
Ipeanut Yoga Ibhola
I-PVC enobume bendalo
Luhlaza, Mfusa, Pinki, Isilivere, Ngwevu Okanye eyenziwe
Ukuqina, ubungqina boQhushumbo kwaye buhlala buhleli
Ukhuseleko kunye ne-technology-proof proof: udonga olungqukuva lujiyeke ngeemilimitha ezimbini, kwaye lukhuselekile kwaye alunabungqina bokudubula.
Uyilo lombhobho wegesi owomeleleyo: hlaziya unyango lwemilomo eyigesi, ubomi obude benkonzo, akukho kuvuza komoya
1. Kuqala khupha iplagi yomoya emhlophe kwibhola yamandongomane
2. Faka indawo yokungenisa umoya yombhobho womoya kwindawo yokungenisa ibhola
3. Qhubeka ucinezela kwimpompo ngezandla zakho okanye iinyawo ukuze ufuthe
4. Emva kokuba ibhola igcwele, khupha ityhubhu kwaye ngokukhawuleza uyivale iplagi yomoya emhlophe ngokuqinileyo (qiniseka ukuyifaka kakuhle, okanye iyavuza)
Ibhola yeYoga inomdla kakhulu, ithambile kwaye ibhetyebhetye, iyanceda ukusebenzisa amandla omzimba, itya utshintsho oluninzi, kwaye inomsebenzi olungileyo wokuthambisa. Kuya kufuneka uzame!
Ibhola yeYoga inokubonelela ngenkxaso ethambileyo kunye nomhlaba oqengqelekayo. Ke ngoko, sinokusebenzisa ibhola ye-yoga ukuyila iindlela ezahlukeneyo zokuzilolonga, ezingenakunikwa sisixhobo esiqhelekileyo soqeqesho.
Egqithileyo Ukomelela kokutsiba ngentambo ngokuthengisa
Okulandelayo: Izinto zokuQala zoNcedo lweyoga zoncedo lweYoga yeContraction Band
Ipeanut ebunjiweyo yeBhola yeYoga
Ihowuliseyili ukubila-ukufunxa non-isiliphu yoga itawuli s ...
Gym kwizinga eliphezulu non-slip PU yerabha yendalo yog ...
I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, Ingxowa yeYoga yokuHamba, iphazili yomthambo, Ingxowa yeYoga yeSling, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba,